इतिहाँसमै चितवनमा सवैभन्दा वढि क’ण्डम, ग’र्भनिरोधक अस्थायी साधनको माग – Ap Nepal
November 27, 2021 460
एक ब्यवसायीका अनुसार चितवनमा इतिहाँसमै पहिलो पटक यति धेरै अ’स्थायी साधनको माग भएको हो। अस्थायी साधनमा पनि क’ण्डमको माग अधिक छ। ग’र्भ रोक्ने र ए’चआ’ई’भीलगायतका यौ’न प्र’सारित सं’क्रमणहरुवाट पनि व’चाउने हुनाले पनि क’ण्डमको माग वढेको हुनसकने उनी वताउँछन् ।-इसिधाकुराबाट।
Prevआज बढ्यो सुनको मुल्य , तोलामा कति बढ्यो त ?
Nextकठै बिचरा ! छोरोको शरीरनै कु हिएर झर्दै छ,आमा छोरो बोकेर रुदै सहयोगको लागि हात फैलाउदै…हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन् हेर्नुहोस आजको राशिफल